Cumar Filish”Guddoomiye ku soo dhowoow Kursi dhiig leh oo dhiggaadii horay ugu baxay! – War La Helaa Talo La Helaa
Cumar Filish”Guddoomiye ku soo dhowoow Kursi dhiig leh oo dhiggaadii horay ugu baxay!
By Xuseen Madoobe	 Last updated Aug 24, 2019
22-ka Bishan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Ex-Xildhibaan Filish u magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho,waxaana arrintaan siyaabooyin kala duwan uga hadlay Bulshada Sooomaaliyeed.
24-ka Bishii July waxaa Kursigan lagu qarxiyay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Alle ha u naxariistee Eng: C/raxmaan Cumar Cismaan “Yariisow”,kaasi oo dhaawac soo gaaray ugu geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Dadka qaar ayaa sheegay in guddoomiyaha cusub ee la magacaabay oo ka mid ah hoggaamiye kooxeedyadii soo maray dalka uusan wax cabsi ah ka qabin kursiga,balse ay cabaq ka taagan tahay hannaan sugida amnigiisa.
” Guddoomiye ku soo dhowow Kursiga dhiiga,waxaana horay loogu qarxiyay guddoomiyihii kaa horeeyay ee Gobolka Bannaadir,marka Alle hakula garab galo Gobolka amnigiisa uu adag yahay,Al-Shabaabna beylah u ah,” ayuu yiri mid ka mid ah dad badan oo faalo ka dhiibtay Bage-ka facebooka ee Villa Soomalaiya oo lagu soo daabacay magacaabista Duqa Muqdisho.
Waxaa la aamisan yahay in la dayacay amniga guddoomiyihii Gobolka Banaadir,islamarkaana ay fadeexad tahay in shaqsi caadi ah uu mas’uul intaasi la eg xasaanadiisa Qarax la kor tagto ka dibna isku qarxiso.